ny lehilahy sy ny toaka
Date: 01 septembre 2017 - 09:59
Mba te hanotany aho hoe ianareo lehilahy ve zany dia tsy maintsy misy passion hafa mitsy ankoatra ny vady? Misy efa tsy mahazaka toaka mbola misotro ihany. Lany vola fotsiny @ revy satria dia mihoaka mandoa rehefa mamo. Mba misy afaka manazava ve hoe inona no tena mahatonga ny lehilahy iray misotro? Tena makaleo mihitsy ny miaina ilay izy satria dia maimbo fofona foana ny olona miara-matory amiko. Kivy mihitsy aho. Ilay fisotroana koa anefa mahatonga azy tsy mahavita ny adidiny ao atrano intsony. Lasa mitady ho maty hozatra. Mba omeo toro hevitra ry reto hoe ahona no hanafahako azy aminio fa mampikorotana ny tokatranonay ilay izy . Merci o
Re: ny lehilahy sy ny toaka
Date: 01 septembre 2017 - 11:46
Aleo fa ho valiako ianao namako
Voalohany aloha asaivo miova tôka sotroina ilay vadinao >>>>> efa misy ny vodka au gingembre ho hitanao fa sady tsy dia misy fofon-toaka ny vadinao no miridiridy faran'izay zokiny ilay zavatra
Hoy ianao hoe inona no antony mahatonga ny lehilahy misotra, eny e na ny vehivavy koa, dia tsotra be, mahafinaritra ny miaina ao anaty tontolo hafa njainjay, ny an'ny sasany rongony no fohany, milay be lé mba fanimpanina iny
Aleo tsy ho taperiko eto ireo antony fa mbola maro ny hilaza ny heviny
Date: 01 septembre 2017 - 12:30
Hoy ianao ry tompon'ny sujet:
"Mba te hanotany aho hoe ianareo lehilahy ve zany dia tsy maintsy misy passion hafa mitsy ankoatra ny vady? "
----> Raha ny azoko tsara ny tinao lazaina izany dia hoe, aminao tsy tokony hanana passion amin'ny sport ohatra ny lehilahy.....Aminao tsy tokony hanana passion amin'ny musique ohatra ny lehilahy......Aminao tokony tsy hanana passion amin'ny bricolage ohatra ny lehilahy.... et j'en passe? Tsara vintana ianao ry madama fa tsy za no vadinao.....
"Mba omeo toro hevitra ry reto hoe ahona no hanafahako azy aminio fa mampikorotana ny tokatranonay ilay izy "
-----> Tsy fantatro hoe hatraiza ilay fisotron'ny vadinao taoka (alcoolique mihitsy ve sa misotrosotro)... Raha mbola eo amin'ny staden'ny fisotrosotroana fotsiny (isaky ny zoma manifika sy ny sabotsy mahafinaritra ohatra), dia mety mbola ho voavahan'ny prise de conscience avy aminy....... Fa raha efa ilay stade alcoolique (efa lasa besoin ilay fisotroana), dia malahelo aho milaza aminao ry madama, fa ny manantona olona qualifiée momba izany mihitsy sisa no solution, azonao angamba ny tiko hambara.......
Date: 01 septembre 2017 - 21:04
Henjana be koa izany hoe tsy tokony hanana passion afa-tsy ny vady izany ka
Date: 02 septembre 2017 - 14:56
Mitovy tsika!io tsisy oe fa maninona,fa otrany minambary izy ngamba dia tsy hitany ny maharatsy an'io toaka io,eo koa ny namana,sarotra b manala olona efa tia trop anio fa dia mitadiava fifaliana hafa enao,nena zao j ai un autre mec,depuis za tsy tezitra tsony mody na mamo tapina ary tsy rarahiko, defa samy mampifaly ny tenany,le.divorce manko toa oe sady elabe no volabe.....
Date: 03 septembre 2017 - 17:55
Raha mbola fofona any ampandriana azo leferina ihany. Fa r'efa mamono vady amanjanaka izy na tratran'ny chomage noho ny toaka, na zistoires @ fiaramonina sns... no gravy ! Amizay samy mandeh, samy mitady araky ny filazan'i Jahel !
Date: 03 septembre 2017 - 18:06
.... Adinoko : Ianao tokoa moa zany ry Alina tsy manana passion akoatra an'io vadinao (mpisotro) io ?!
Date: 04 septembre 2017 - 14:01
Ny vady aman-janako no pasion-ako. Ankoatra an'izay dia ny asa andavanandro. Mety hoe izay koa ve no mahatonga ahy exigente loatra amin'izy misotro?
Date: 04 septembre 2017 - 14:13
Hoy ianao ry tompon'ny sujet.....
"Mety hoe izay koa ve no mahatonga ahy exigente loatra amin'izy misotro?"
-----> Fa ny mety ho possible ihany koa dia, ny exigence-nao (ny amin'ny lafiny rehetra mihitsy je suppose), no niteraka ilay fisotroany mihitsy.
Date: 04 septembre 2017 - 15:06
TRANDRAKA = efa nisotro foana izy na t@ izahay mbola mpisipa aza. Fa nihevitra aho hoe hiova izy rehefa manana tokatrano sy manan-janaka. Diso hevitra aho fa tsy nampiova azy zany. Lasa makaleo ilay fiainanay rehefa misotro izy satria dia lasa ohatra ny halako be izy. Nefa dia milamina ndray rehefa misava ny toaka
Date: 05 septembre 2017 - 06:55
Alina>>> olona tsy epanoui izany tsy manana passion izany. Ny olona iray dia tokony manana fialam-boly iray tiany farafahakeliny. Ny anao izao hoy ianao dia ny fianakavianao dia ny an'ny vadinao izany toaka.
Tadidio koa fa tsy misy lehilahy miova izany. Izay nataony tamin'ny mbola mpisipa ihany no ataony rehefa manambady izy. Raha miova izy dia efa safidiny izany fa tsy ho voahovanao izany izy.
Ny azonao atao dia ny manodina ny sainy, mitady zavatra creatif mahatonga azy ho tamana ao an-trano. Ohatra, indraindray mba antsoina ao an-trano ny namany hisotro fa aoriana an'izay kosa dia tsy maintsy miara-mitsangatsangana en famille. Rehefa ilay miaraka irery iny ianareo dia proposer-o hoe inona no mba tiany ho sotroina. Ho hitanao fa tsy mahahovoka akory kay rehefa tena ampisotroina.... Ampiasao ny saina fa lehilahy anie tsy dia complique rehefa tena hainao ny mitondra anazy e
Date: 05 septembre 2017 - 15:05
ezaka = Misaotra anao @ torohevitra
Date: 06 septembre 2017 - 15:58
Date: 11 septembre 2017 - 15:35
Ny mitondra @bavaka azy isan'andro,zay no vahaolana...raha ny herin'ny tenanao sy ny fisainanao tsy hahaafaka azy mintsy @io fatorana io;jereo Jaona 8:36...de mahereza ndrindra.